သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အဖြေကပြောပြနေတဲ့ သင့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာ – Trend.com.mm
Posted on April 12, 2018 by Noel
သင့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာများပါလိမ့်?မိသားစုလား? ချစ်သူလား? စီးပွားရေးလား? ပညာရေးလား? သင့်ကိုယ်သင် မဖြေခင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို အရင်ဖြေကြည့်ပါလား။ သင့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေလေးတွေက ပြောပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။သင့်မှာ အခုချက်ချင်းထလုပ်မှဖြစ်မယ့်အခြေအနေ တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုပါတော့။ဥပမာ
၂။မိုးရွာနေပြီမို့လို့ အပြင်မှာလှန်းထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေကို ရုတ်ရတော့မယ်
ဒီ ငါးခုထဲက သင်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးသင်ချက်ချင်းထလုပ်မယ့်အရာက ဘာများလဲ?
ဖြေပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အဖြေကနေတစ်ဆင့် သင့်ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
၁)သင်ပထဆုံးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အလုပ်က ကလေးငယ်လေးကိုတိတ်အောင်ချော့မြူဖို့ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဘ၀မှာ အရေးအကြီးဆုံးက မိသားစုပါတဲ့။
၂)အ၀တ်တွေရုတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ဘ၀မှာအရေးအကြီးဆုံးအရာက အချစ်နဲ့အိမ်ထောင်ရေးပါတဲ့။
၃)ရေပိုက်ခေါင်းကိုပိတ်ဖို့အရင်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ငွေက သင့်ရဲ့ ဘ၀မှာအရေးကြီးဆုံးအရာပါတဲ့။
၄)အိမ်ရှေ့ကိုသွားပြီးတံခါးသွားဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဘ၀မှာအရေးအကြီးဆုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပါပဲ။
၅)နောက်ဆုံး သင်က ဖုန်းကိုအရင်ဖြေခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အလုပ်ကသာ သင့်ဘ၀အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာပဲလို့ ဖော်ပြနေပါတယ်။
သင်ရွေးချယ်တဲ့အဖြေနဲ့သင့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာ ထပ်တူကျရဲ့လား?
သငျ့ဘဝရဲ့ အရေးကွီးဆုံးအရာက ဘာမြားပါလိမျ့?မိသားစုလား? ခဈြသူလား? စီးပှားရေးလား? ပညာရေးလား? သငျ့ကိုယျသငျ မဖွခေငျ ဒီမေးခှနျးလေးတှကေို အရငျဖွကွေညျ့ပါလား။ သငျ့ဘဝရဲ့ အရေးကွီးဆုံးအရာက ဘာလဲဆိုတာ ဒီမေးခှနျးရဲ့အဖွလေေးတှကေ ပွောပွပေးသှားပါလိမျ့မယျ။
စဉျးစားကွညျ့လိုကျပါ။သငျ့မှာ အခုခကျြခငျြးထလုပျမှဖွဈမယျ့အခွအေနေ တဈခုရောကျနပွေီဆိုပါတော့။ဥပမာ
၂။မိုးရှာနပွေီမို့လို့ အပွငျမှာလှနျးထားတဲ့အဝတျအစားတှကေို ရုတျရတော့မယျ
ဒီ ငါးခုထဲက သငျရှေးခယျြရမယျဆိုရငျ ပထမဆုံးသငျခကျြခငျြးထလုပျမယျ့အရာက ဘာမြားလဲ?
ဖွပွေီးပွီဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ အဖွကေနတေဈဆငျ့ သငျ့ဘဝရဲ့အရေးကွီးဆုံးအရာက ဘာလဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
၁)သငျပထဆုံးရှေးခယျြလိုကျတဲ့အလုပျက ကလေးငယျလေးကိုတိတျအောငျခြော့မွူဖို့ဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ ဘဝမှာ အရေးအကွီးဆုံးက မိသားစုပါတဲ့။
၂)အဝတျတှရေုတျဖို့ရှေးခယျြလိုကျတယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ ဘဝမှာအရေးအကွီးဆုံးအရာက အခဈြနဲ့အိမျထောငျရေးပါတဲ့။
၃)ရပေိုကျခေါငျးကိုပိတျဖို့အရငျဆုံးသှားမယျဆိုရငျတော့ ငှကေ သငျ့ရဲ့ ဘဝမှာအရေးကွီးဆုံးအရာပါတဲ့။
၄)အိမျရှကေို့သှားပွီးတံခါးသှားဖှငျ့ပေးမယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ ဘဝမှာအရေးအကွီးဆုံးက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဆှမြေိုးသားခငျြးတှပေါပဲ။
၅)နောကျဆုံး သငျက ဖုနျးကိုအရငျဖွခေဲ့မယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့အလုပျကသာ သငျ့ဘဝအတှကျအရေးအကွီးဆုံးအရာပဲလို့ ဖျောပွနပေါတယျ။
သငျရှေးခယျြတဲ့အဖွနေဲ့သငျ့ဘဝရဲ့ အရေးကွီးဆုံးအရာ ထပျတူကရြဲ့လား?
ပျင်းရိထုံထိုင်းအိပ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကို အချိန်တိုအတွင်း လန်းဆန်းတက်ကြွသွားစေမယ့်နည်းလမ်းများ